शेयर बजारमा रहेका नयाँ लगानीकर्ताले शेयर बजारको सहि ज्ञान नभएर आफु संग भएको पैसा गुमाउने गर्छन। नयाँ लगानीकर्ताले छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउन खोज्दा आफ्नो पुजी गुमाउने गरेको देखिन्छ। उनीहरु शेयर बजारको बारेमा जान्न चाहन्छन तर कसरि लगानी गर्ने भन्ने ज्ञान उनीहरुमा हुदैन जसकारण उनीहरु निरास हुने गर्छन। त्यसैले आज हामीले हाम्रो रोजाइमा रहेका शेयर बजारमा कसरि लगानी गर्ने भनेर सिक्नको लागि अति उपयोगी र ज्ञानबर्द्धक पुस्तकको सुची लिएर आएका छौ जुन तपाइले सजिलै घरै बसेर अर्डर गर्न सक्नु हुने छ।
पढनै पर्ने पुस्तक
धितोपत्र र शेयरमा के फरक छ ? जान्नुहोस
आफु संग भएको शेयर किन्दा र बेच्दा कति ब्रोकर कमिसन तिर्नु पर्छ ? जान्नुहोस
कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुदैन ? कम्पनी छनोट कसरि गर्ने ? जान्नुहोस।